Famolavolana Changeover vaovao 1P, 2P, 3P, 4P, 125A
AS (M) -125 andian-dahatsoratra fametrahana sy fiasan-dalàna Fomba fiasa mahazatra 1. Ny mari-pana amin'ny rivotra dia -5 ℃ ～ + 40 ℃, ny salan'isa antonony ao anatin'ny 24 ora dia tsy tokony hihoatra ny 35. 2.Ny hamandoana akaiky dia tsy tokony hihoatra ny 50% amin'ny maripana farany + 40 ℃, ny hamandoana avo kokoa dia azo ekena amin'ny ambany ...
Maninona no malaza ny mpandahatra jiro Zinc Oxydère?
Ny arrester ny jirika Zinc Oxide dia ampiasaina amin'ny fiarovana ny fitaovana elektrika amin'ny karazana tanjaka mahery vaika ateraky ny asa maivana na fanovana. (Zinc Oxide jiro arrester arrester using) Surge arrenders the advanced most over voltage voltage Protected in the world, made of metal-oxide (MO) ...
Momba ny fanasitranana tena Type Shunt Power Capacitor
Misy pitsopitsony momba ny B (S) MJ capacitor: Ny fanasitranana tena Type Shunt Power Capacitor dia ampiasaina amin'ny rafitra herinaratra 50Hz na 60Hz izay tena manatsara azy: , △ Hatsarao ny kalitaon'ny herinaratra. △ Mihady habetsaky ny mpanova ary ...
Famolavolana vaovao 16A mankany 100A 4P Switchover Change mandeha ho azy
General ASIQ switch herinaratra roa (izay antsoina hoe Switch) dia switch izay afaka manohy manome herinaratra raha sendra vonjy maika. Ny switch dia misy switch switch sy mpanera iray, izay ampiasaina indrindra hamantarana raha ara-dalàna ny famatsiana herinaratra lehibe na ny famatsiana herinaratra. Rehefa ma ...
(1) Tombony lehibe amin'ny fanapahana fuse dropout ① Fifidianana tsara. Raha mbola mifanaraka amin'ny filan'ny 1.6: 1 ny tahan'ny fifidianan-tsolika mihoatra ny fehezan-dalàna mifehy ny fenitra nasionaly sy ny fenitra IEC, izay midika hoe ny isa misy ny uppe ...
Momba ny fanasitranana tena karazana Shunt Power Capac ...
New Design 16A mankany 100A 4P mandeha ho azy Chang ...